कसरी बसाल्ने बिदाइको संस्कार ? - Khelpati
कसरी बसाल्ने बिदाइको संस्कार ?
शनिवार, भदौ १३, २०७७ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । कप्तान विराज महर्जन पछिल्लो समय राष्ट्रिय फुटबल टिम बाहिर रहदै आएका छन् ।
प्रदर्शन र फिटनेशको समस्या भन्दा पनि स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिनसँगको सम्बन्धका कारण विराज टिम बाहिर रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनी विगत १ वर्षदेखि टिम बाहिर रहेका छन् ।
यसबीचमा नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलसँगै महत्वपूर्ण प्रतियोगिता खेलिसकेको छ । तर उनलाई प्रारम्भिक छनोटमा समेत बोलाईएको छैन ।
एन्फा र प्रशिक्षक समेत बिराजको विषयमा मुख खोल्न चाहँदैनन् । उनले अब राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिने निधो गरेका छन् । त्यसअघि कम्तिमा घरेलु दर्शकमाझ सुखद बिदाइ लिने उनको इच्छा छ ।
बिराज मात्र हैन, राष्ट्रिय फुटबल टिमका धेरै खेलाडी सुखद बिदाइको प्रतिक्षामा छन् ।
स्ट्राइकर जुमानु राई र सन्तोष साहुखल तथा मिडफिल्डर भोलानाथ सिलवाल र राजु तामाङ राष्ट्रिय टिमबाट सुखद बिदाइको प्रतिक्षामा छन् । बिराज बाहेक अन्य चार खेलाडी विगत ९ वर्षयता राष्ट्रिय टिम बाहिर छन् । सबैको चाहना कम्तिमा सुखद बिदाइ रहेको छ ।
पूर्व कप्तान तथा स्ट्राइकर अनिल गुरुङकै ब्याजका हुन्, विराज, भोला, राजु, जुमानु र सन्तोष । नेपालका लागि १० अन्तराष्ट्रिय गोल गरेका अनिलले एन्फा कम्प्लेक्समा तत्कालिन अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठको हातबाट कोट लगाउँदै बिदाइ पाएका थिए । अनिलले अन्तराष्ट्रिय खेलमार्फत सुखद बिदाई पाए । तर अन्य खेलाडी पनि अनिलको जस्तै बिदाइ चाहन्छन् ।
महत्वपूर्ण समय देशकालागि समर्पण गरेका खेलाडीहरु बिदाइ नपाउँदा खिन्न छन् । हुन त सबै खेलाडीको बिदाइ खेल जिवन जस्तो शानदार त रहदैन तर राष्ट्रका लागि योगदान गरेका खेलाडीको सुखद बिदाइको संस्कार एन्फामा बस्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी तथा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका महिला विभाग प्रमुख हरि खड्का आफुले पनि राम्रो बिदाइ नपाएकोमा गुनासो गर्छन् । नेपालका लागि सर्वाधिक १३ गोल गरेका खड्काले खेलाडीलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने संस्कारनै खेलकुदमा नभएको बताउँछन् ।
‘राज्यले खेलकुदमा हेर्ने नजरनै फरक छ । कन्जुस गरेको जस्तो देखिन्छ । खेलाडीले गरेको योगदानको कदर हुँदैन । यो हाम्रो समयमा पनि थियो र अहिले पनि यथावत छ ।’ उनी भन्छन् ।
प्रशिक्षक खड्का खेलाडीको सुखद बिदाइको संस्कार फुटबलको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
बालगोपाल महर्जन र उपेन्द्रमान सिंह घरेलु फुटबलमा अझै सक्रिय छन् । दुबैले सन् २००५ मा तत्कालिन युवराज धिराज पारस विर बिक्रम शाहको हातबाट कोट लगाएर बिदाइ पाएका थिए । थ्री स्टार क्लबबाट प्रेसिडेन्ट कप खेल्दा उनीहरुको दशरथ रंगशालामा बिदाइ भएको थियो । त्यसपछि एन्फाबाट कोट सहित बिदाइ पाउने अनिल एक्ला खेलाडी हुन् ।
पूर्व कप्तान राकेश श्रेष्ठले पनि घरेलु मैदानमा बिदाइ पाएनन् । एन्फाले गरेको सम्मान कार्यक्रमबाटै उनले सन्यासको घोषणा गरे ।
‘मेरो संन्यास स्टेजमार्फत भयो । तत्कालिन समयमा उमेरले पनि साथ दिएको थिएन । नयाँ खेलाडी आउने क्रम जारी थियो । एन्फाले कार्यक्रम गरेर अपार्टमेन्ट दिएपछि स्टेज मार्फतनै संन्यास घोषणा गरेको हो ।’ हाल उमेर समूहका खेलाडी हेरिरहेका राकेशले भने ।
एन्फाले यस बिषयलाई आफुहरुले गम्भिर रुपमा हेरेको बताउँछ ।
एन्फा प्रबक्ता किरण राई खेलाडीको बिदाइ विषयमा एन्फा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै शैद्धान्तिक रुपमा यसमा लाग्ने बताउँछन् ।
‘खेलाडीको बिदाइको बारेमा हामीले नसोचको हैनौं । हामी सकारात्मक छौं । सैद्धान्तिक रुपमा यसलाई पुरा गर्नतर्फ अग्रसर छौं ।’ उनी भन्छन् ।
प्रबक्ता राई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता सहित खेलाडीलाई बिदा गर्ने विषयमा फुटबल संघ तयार रहेको बताउँदै खेलाडी समेत यसमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो चाहना पनि खेलाडी बिदाइ नै हो । कोट लगाउने मात्रै हैन । अन्तराष्ट्रिय खेल खेलाएर बिदा गरौ भन्ने हो । तर त्यसको लागि मैदान चाहियो । पहिला त खेलाडीनै फिट हुनुपर्याे । कोचले उसलाई विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्याे । कोचले पनि रिजल्ट हेर्छ र सोहि अनुुरुप खेलाडी तयार हुनुपर्याे । हामी सकारात्मक छौं ।’ उनी भन्छन् ।
समस्या खेलाडीमा पनि -
देशका लागि योगदान दिएका खेलाडीले सुखद बिदाइ नपाउनु पिडादायी क्षणनै हो । एन्फासंगै स्वयम खेलाडी समेत यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।
‘जब खेलाडीको उमेर ढल्किदै जान्छ, तब उ प्रशिक्षकको नजरमा समेत गल्दै जान्छ । जब उसले संन्यासको बारेमा सोच्छ, निकै ढिला भैसकेको हुन्छ । उसले कहिल्यै पनि प्रशिक्षक र प्रशासनसँग आफ्नो भविष्य बारेमा सल्लाहनै गर्दैन ।’ एन्फाका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
एन्फा प्रवक्ता राई संयोग, परिस्थिती र सन्दर्भ नमिल्दा खेलाडीलाई ब्यवस्थित तरिकाले बिदाइ गर्न समस्या आएको बताउँछन् ।
‘ बिदाइको विषयमा पहिला सन्दर्भ, परिस्थिति र संयोग सबै मिल्नुपर्ने रहेछ । सुखद बिदाइको लागि खेलाडीले आफुले सन्यास कहिले लिने हो भन्ने कुरा निधो हुन पर्यो । सोहि अनुरुप घरेलु मैदानमा अन्तराष्ट्रिय खेल हुनुपर्याे ।’ उनी भन्छन् ।
‘राष्ट्रिय टिम भनेको जागिर जस्तो हुँदैन । प्रशिक्षकले छनोट नगरेपछि बाहिर बस्नपर्ने समय निश्चित हुन्न । यस विषयमा खेलाडीले पनि पहिल्यै सोचेमा समस्या नआउन सक्छ । खेलाडीको सुझावसँगै प्रशासनले बिदाईको तयारी गर्ने हो ।’ राई भन्छन् ।
प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्य पनि खेलाडीले आफ्नो भविष्यबारे पहिल्यै सोचेर एन्फासँग सहकार्य गरेर संन्यासको लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘खेलाडीले सधै राष्ट्रिय टिमबाट खेल्छु र टिममा परिरहन्छु भन्ने सोच राख्नुहुँदैन । खेलाडीले मेरो समय आयो भन्ने थाहा पाएपछि एन्फासँगको सहकार्यमा बिदाइ लिनुपर्छ । यो हाम्रोमा संस्कारनै छैन । त्यसले गर्दापनि समस्या देखिएको हो ।’ उनी भन्छन् ।
‘तर एन्फाले पनि खेलाडीको योगदान विर्सनु भएन । एउटा मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गरेर खेलाडीको सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्नुपर्छ ।’ शाक्य थप्छन् ।
क्रिकेट टिमको प्रशिक्षणका लागि ५ खेलाडी थप
खेलकुद मन्त्रालयद्धारा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कारको छनोट
कप्तान ज्ञानेन्द्रसहित ३ खेलाडीलाई कोरोना
पारसलाई भोट गर्नु भयो त ?
सिटीलाई ओलम्पियाकोसको चुनौती